तराई–मधेसमा ‘खलीफा’ आतंक - Jhilko
तराई–मधेसमा ‘खलीफा’ आतंक
अरबी भाषामा ‘खलीफा’ शब्दको अर्थ प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी भन्ने हुन्छ । परम्परागत मुस्लिम साम्राज्यमा इस्लामी राज्य चलाउने शासक नै खलीफाको नामले जानिन्थे । इस्वी सम्बत ६२२ मा पैगम्बर महम्मदको मृत्यु पछाडि खलीफा पूरै मुस्लिम क्षेत्रको राजनैतिक नेता मानिन्थे । वर्तमानको विश्वमा यस्तो मुस्लिम साम्राज्यको अस्तित्व छैन ।
तर, अमेरिकी साम्राज्यले यस्ता खलीफाहरुलाई विश्वभर प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने गर्छन । भर्खरै गुएदो नामको खलीफालाई भेनेजुएलाको राष्ट्रपतिमा अमेरिकाले अनुमोदन गरेको थियो । मध्यपूर्वमा अमेरिकी खलीफा हुन नचाहनेहरु इराकका सद्धाम हुसेन, लिवियाका कर्णल गद्दाफीको पतन भयो । पहिले अमेरिकी खलीफा भएका तर पछि त्यो खेमा छोडेका ओसामा विन लादेनको पनि त्यही नियति दोहोरियो ।
यसरी नै नेपाली राजनीतिमा पनि यतिखेर खलीफाको प्रवेश भएको छ । तराई–मधेसमा सिके राउतलाई खलीफाको नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । उनको क्रियाकलापले उनलाई खलीफा नामले सम्बोधन गर्नु पनि अनौठो मान्नु हुँदैन । राउतलाई खलीफा नामले सम्बोधित हुनु संयोग मात्र मान्न सकिन्न । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको बहससँगै उनको आश्चर्यजनक रिहाइ र सहमतिले यो प्रसंगलाई नजिकबाट बुझ्न सहज भएको छ । आउँदो चैत्र ४ र ५ गते जनकपुरमा हुने उनको समूहको राष्ट्रिय परिषदको बैठकमा लिने निर्णयले खलीफाको भूमिका प्रस्ट हुनेछ ।
त्यो भन्दा प्रस्ट चैत्र ५ गते सप्तरीको रुपनीदेखि लाहानसम्म उनको समूहले गर्ने मार्चपासले पार्नेछ । मधेसको राजनीतिमा परम्परागत खलीफाहरुको विरुद्ध नयाँ खलीफाको प्रवेशले मधेसको राजनीति यतिखेर तात्तिएको छ ।
पैगम्बर महम्मद भन्दा पछि स्थापित खलीफा पनि धेरै किसिमका थिए । पहिलो ‘खलीफा रसुल अल्लाह’ जसलाइ भगवानका सन्देशबाहक भनिन्थ्यो । दोस्रो ‘रइस’ को राज्यलाई ‘रियासत’, तेस्रो ‘अमिर’को राज्यलाई ‘अमीरात’ चौथो ‘खान’को राज्यलाई ‘खानत’ भनिन्थो । तर खलीफाको राज्य खलीफातलाई राम्रो मानिन्नथ्यो । अरबी भाषामा खलीफातको ‘ख’ उच्चारणलाई ‘खराब’ र ‘खरिद’ (किनबेच)संग तुलना गरिन्थ्यो । यस्तो खलीफाको सिलसिलसिला मुस्लिम उस्मानी साम्राज्यको पतनसंगै भएको थियो । खलीफाहरुले स्थापित गरेको खलीफात राज्यहरु कुनै दर्शन सिद्धान्तमा आधारित थिएन । यसर्थ एकआपसको बैमनुष्यतासंगै यिनका रियासत तासका घरझैं गल्र्याम गुर्लुम ढले इतिहासमा ।
अमेरिकी प्रतिवेदनको गुह्य
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालमा व्यापक मानव अधिकार उलंघनका घटना भएको दावी गरेको छ । यस सन्दर्भमा अमेरिकाले सन् २०१८ को मानव अधिकार उलंघनमा नेपाल धेरै देशहरु भन्दा माथि रहेको फेहरिस्त तयार गरी सार्वजनिक गरेको हो ।
अमेरिकाले द्वन्द्वकालीन प्रकरणमा भएको घटनालाई विशेष उल्लेख गरेको छ । बालकृष्ण ढुङ्गेललाई दिएको माफीको घटनालाई पनि उछालेको छ । सिके राउतका समर्थक राममनोहर यादव, संविधान घोषणाको दौरान भएका घटनालाई मानव अधिकार उलंघनको चरम नमूना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष दश वर्षे जनयुद्धमा भएको घटनाका उसकै भाषामा पीडकहरुलाइ उन्मुक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ । गैर न्यायिक क्रुर हत्या, यातना, गैर न्यायिक थुना, वेभ साइटमाथि नियन्त्रण तथा आपराधिक करार दिइनु, संगठित हुन पाउने अधिकारको हनन, गैर सरकारी संस्थालाइ नियन्त्रण गर्ने गरी कानूनको निर्माण, मानव तस्करी, बालविवाह र तिब्बती शरणार्थीलाइ आवत जावत गर्न बन्देज लगाएको आरोप लगाएको छ ।
सुनचाँदीको भाउ घट्ने क्रममा, किन्ने होइन त ?
‘सरकार–सिके राउत सहमति विखण्डनकारी’
संयमता पहिलो पहिचान हो
वास्तवमा सबैजना संयम हुन जरुरी छ संयमता अहिलेको उपचार विधि हो । आफूलाई संयम राख्नु...
रेडियो नेपालमा आन्दोलन गर्ने पत्रकारहरु पक्राउ
रेडियो नेपालको दिपायलबाट निस्कासित तीन जना पत्रकारको पुनर्बहाली तथा श्रमजीवी पत्रकार...
दश वर्षपछि ब्रिटिस एयरवेज पाकिस्तान फर्कियो
बेलायती वायुसेवाको उक्त उडान पाकिस्तानका लागि निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा हेरिएको...
सिरहाको कल्याणपुर १२ मा ७१. ८८ प्रतिशत मतदान, मत गणना केही...
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ को वडाअध्यक्ष पदका लागि आज भएको मतदानमा...